समाचार - कसरी आउटडोर कपडाको कपडा छनौट गर्ने?
बाहिरी कपडाका लागि धेरै प्रकारका कपडाहरू छन्। कुन तपाईंको लागि सब भन्दा उपयुक्त छ?
बाहिरी कपडाहरूको चयनमा, त्यहाँ छ आवश्यक कार्यहरू छन्। छ वटा सुविधाहरूमा एक नजर राख्दछौं:
हावा पारगम्यता को स्तर कपडाको हवा संचलन को कठिनाई मा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि बाहिरी गतिविधिहरूको लागि एयर पारगम्यता महत्त्वपूर्ण विचार हो। ती मध्ये, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कभर र सीट हो। मोहर लगाईएको घेरा र कभरहरूमा, एयरटिक कपडाले फफूरो पार्न सक्छ। सिटको लागि, सास फेसिएको कुशन बढी सहज हुन्छ, हातमा टाँसिदैन, तातो गर्मीमा बढी आरामदायक हुन्छ।
पानी प्रतिरोध मुख्यत: पानी कपडामा पानीको थोपामा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर गर्दछ। तर त्यहाँ एक बिन्दु छ, पानी प्रतिरोध र हावा पारगम्यता एक पछि अर्को हो। सामान्यतया भन्नुपर्दा, नराम्रो हावाको पारगम्यता भएको कपडा पानी प्रतिरोधात्मक हुन्छन्, यस्तै विनाइल लेटेड वा लेमिनेटेड कपडाहरू जस्ता अभेद्य। जलरोधक बिभिन्न, जलरोधक कपडा र याट आन्तरिक सजावटको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
पोशाक प्रतिरोध तनाव अन्तर्गत लगाउने लुगा सामना गर्न एक कपडा को क्षमता को जनाउँछ। जहाज र आउटडोर प्रयोगको लागि प्रयोग गरिएका कपडाहरू सामान्यत: भारी, कडा र सामान्य रूपमा विनाइल वा अन्य रेजिनका साथ लेपित हुन्छन्। यो मुख्यतया एक नरम उपस्थिति र भावना प्राप्त गर्न, र लगाउने प्रतिरोध सुधार गर्न को लागी हो।
यूवी प्रतिरोध सायद बाहिरी कपडाहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सरल कारक हो। उच्च यूवी प्रतिरोध, सूर्यको प्रकाशमा कपडाको सेवा जीवन लामो। सूर्यको प्रकाशको लागि धेरै कपडा छायाको लागि भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
कपडाको र fast्ग स्थिरता जति धेरै हुन्छ, बान्की कम हुने सम्भावना कम हुन्छ। कपडाको रंग स्थिरता सूर्यको प्रकाश, वर्षा र हिउँमा लामो समयको लागि रंग कायम गर्न यसको क्षमतामा निर्भर गर्दछ। रंग स्थिरता एक सौंदर्य कारक को अधिक छ। यद्यपि, यदि चहकिलो र awहरू एnनिings्स, कभरहरू, म्याटहरू, इत्यादिका लागि प्रयोग गरियो भने, र color्ग स्थिरता विचार गर्नुपर्नेछ। यदि कपडा ठूलो मात्रामा प्रयोग गर्न वा लामो समयको लागि बाहिरको सम्पर्कमा छ भने, छापिएको बान्कीसँग फेब्रिक समयसँगै फिक्याउन सक्छ।
इनडोर कपडाको तुलनामा, बाहिरका कपडाहरूको सफाई कम महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। तर बाहिरी कपडाहरूको लागि, सफाईले यसको सेवा जीवनलाई असर गर्दछ। सरसफाइ, वास्तवमा कपडाको फोहोर हटाउनु हो।
यदि सफा गरिएन भने, मोल्ड कपडामा रहनेछ र फोहोरमा बढिरहनेछ। जस्तो कि एकतर्फी लेपित कपडा एकदम सफा छैन, त्यसैले यस प्रकारको कपडाले केहिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।